China Chlorine dioksayidi yeCwecwe ekwenziweni nakwifektri FIZA
Chlorine dioksayidi izingxobo 20 ...
Igama leKhemikhali: Chlorine dioksayidi yeCwecwe
Inombolo ye-CAS: 10049-04-4
Iipropati: Itheyibhile yekhloriyoksayidi iyinto ehanjiswayo, engadubuliyo, amacwecwe e-chlorine dioxide, adityaniswa nomthamo othile wamanzi, iphendula ngokukhawuleza kwaye ikhuselekile kwisisombululo esisebenza ixesha elide.
1.Very ngokukhawuleza isisombululo esisebenzayo se-chlorine dioxide kwindawo.
Akukho lutyalo mali lwenkunzi okanye umbane ukulungiselela ukuveliswa okufunekayo.
Ingqondo 3.Safe thelekisa nezinye iimveliso chlorine dioxide.
Umyalelo wokuxuba olula we-4 wabasebenzisi bokugqibela kunye nabangengabo abaqeqeshiweyo.
5.Iyanyibilika ngokukhawuleza emanzini ashushu nabandayo.
6.Zonke i-SY Chlorine Dioxide Tablets ziipilisi zamanzi ezisemanzini.
7.Chlorine Dioxide Tablets evela e China inokusetyenziswa kwizicelo eziyi-100.
Ubungakanani kunye nephakheji
1kg / iphakheji enkulu; 1g / tablet, 4g / tablet, 10g / tablet, 20g / tablet, 100g / tablet, 200g / tablet, okanye ngokwemfuneko yabathengi.
1. Iinkuku, Intengiso yobisi, Intengiso yeehagu
Iipilisi zechlorine dioxide zinokusetyenziswa kwi-turkey, kwi-broiler, kumaleko, kwiindawo zokufuya; kunye neebisi, iinkomo kunye neendawo zenyama; kunye nokuhlwayela, iindawo zokugcina abantwana kunye nokugqiba izixhobo ukunceda ukuphucula iziphumo zemveliso. Umgangatho wamanzi amdaka kunye nokufumaneka kunokuba nefuthe elibalulekileyo kwimveliso nakwimpilo yezilwanyana. Kwimeko apho amanzi eenkukhu aqukethe ukungcola, unyango lwamanzi kufuneka lukhuthazwe.
IZICELO APHO USETYENZISWA iipilisi zeCHLORINE DIOXIDE
• Ukusela iinkukhu Ukubulala iintsholongwane emanzini.
• ekulungisweni kweenkukhu / kwiifama zeenkukhu
• Ukususwa kwebiofilm.
• Ukucocwa kwe-CIP.
• Ukubulala iintsholongwane ngokungenisa umoya (iindonga ezimanzi).
• Ukukhukhula / ukutshiza.
• Ukugungxula umgca.
• Ukutya ukutya okuziinkozo nokondla.
• Ukuhlamba jikelele kunye nococeko.
EZINYE IZIBONELELO ZE-CHLORINE DIOXIDE PROPERTIES ZENKQUBO ZOKUSELA IINKQUBO ZAMANZI.
• Ngokukhawuleza nangokubanzi isibulala-ntsholongwane esisebenzayo kwiinkqubo zamanzi okusela.
• Ukusebenza kuluhlu olubanzi lwe-pH (4-10).
• Yonakalise kancinci kune-chlorine.
• Sele isebenza ngoku kwiidosi eziphantsi.
• Isidibanisi esinamandla emanzini.
• Isusa i-biofilm kwimigca yamanzi.
• Akukho lungiselelo lweemveliso zeklorinating.
2. Iipilisi zechlorine dioxide zinokusetyenziselwa ukudada echibini kunye ne-Spa
I-chlorine dioxide inokucoca kwaye icoce iphuli yakho, ibhafu eshushu, iJacuzzi, okanye ispa. I-chlorine dioxide kukucoca iintsholongwane emanzini okubhukuda, kususa isilayidi kunye ne-biofilm kwiinkqubo zokujikeleza, kunye nokugcina imibhobho icocekile. Iyahambelana nazo zonke iinkqubo. Ngaphezulu, isebenza ngokukhawuleza: ukubulala ukungunda, ukungunda kunye nefungi kwimizuzwana engama-60. Zikhusele kwiintsholongwane eziyingozi kubandakanya iLegionella, giardia kunye ne-cryptosporidium.
Egqithileyo Uvavanyo loMlilo Cupel
Okulandelayo: Chlorine dioksayidi enye yecandelo lePowder
20g Chlorine dioksayidi yeCwecwe
Chlorine dioksayidi iintsholongwane yeCwecwe
I-Chlorine Dioxide Effervescent Tablets
Amacwecwe e-Clo2 Chlorine dioksayidi